Tonga mariky ny safidy | Martech Zone
Tongava marika safidy
Asabotsy 13 Febroary 2010 Sabotsy 28 Novambra 2015 Lorraine Ball
Tamin'ny lahatsoratra vao haingana, Seth Godin nametraka fanontaniana lehibe heveriko fa ny tompon'orinasa rehetra dia mila mamaly: Fa maninona ianao? Fa maninona izao?
Mamela ny ankamaroan'ny sokajy vokatra, fa azo antoka fa amin'ny serivisy amin'ny Internet dia manan-tsafidy isika. Raha ny momba ny mpamatsy mailaka, mpampiantrano tranonkala, ary lozisialy fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa, ny tompona orinasa manan-tsaina dia tokony hanontany loharanom-pahalalana mety hitranga: Noho ny safidy marobe, nahoana aho no misafidy anao?
Raha nanomboka ny asako aho dia nibolisatra tamin'ny vidiny ambany indrindra, manao izany ny ankamaroan'ny tompona orinasa. Saingy taorian'ny fifampiresahana vitsivitsy tamin'ireo mpamatsy vola ambany, mazàna rehefa nisy zavatra tsy nety dia fantatro fa misy lanja ny fotoako. Ka izao, rehefa manombatombana fitaovana sy loharano an-tserasera aho dia manana fepetra marobe izay zava-dehibe kokoa noho ny vidiny.
Mameno ve ny vokatra my fepetra. Na dia misy fitaovana CRM maromaro aza ankehitriny, dia mampiasa aho AdiresyTwo, satria olona nitantana orinasa toa ahy io. Ireo lohateny, saha, fandaminana dashboard ary misy dikany ho ahy.
Azoko fantarina ve ny fomba fiasa raha tsy mamaky sombin-torolàlana lava, na misy olona mandehandeha mamaky azy io. Tsy manam-potoana hanaovana demô lava aho amin'ny antoandro. Ary na dia afaka mamaky (tena marina aza) aho dia tsy te-haka fotoana handinihana ireo torolàlana. Ny lozisialy ho serivisy dia tokony hanompoana irery. Ny interface ny mpampiasa dia tokony ho intuitive. Vonona ny handany fotoana amin'ny endri-javatra mandroso aho, saingy omeo ahy ny fototra. Ny ohatra tiako indrindra amin'ny interface interface tsotra: Fifandraisana tsy tapaka. (Momba ny eo an-toerana daholo aho, ary halako ny tsy ahafahako manohana ireo orinasa eMail miorina any Indianapolis, saingy tsy nahita zavatra mora ampiasaina aho)
Fanohanana ara-teknika ampiasain'ny olona. Rehefa mieritreritra ny hisoratra anarana amin'ny fitaovana an-tserasera aho, ny iray amin'ireo zavatra voalohany ataoko, alohan'ny hanomezako azy ireo ny carte de crédit, dia miantso ny tsipika fanohanana azy ireo. Tiako ho fantatra hoe firy ny filaharan'ny 2,3,2,1,1,1,1,1 # Tsy maintsy vonoiko alohan'ny ahazoako olona velona. Ary rehefa ataoko, miasa amin'ny script ve izy ireo, miaraka amina fanontaniana maromaro, sa mahay mihaino ahy izy ireo? Call mpanamboatra endrika an-tserasera'sFormstack fanampiana ara-teknika na Provim ary ho hitanao ny tiako holazaina. Olona tena izy, miaraka amin'ny fahafantarana ny fanontanianao. Na dia nihatsara aza ny GoDaddy, dia mbola lava loatra ny fiandrasana, ary ny habetsaky ny fampahalalana tokony hanananao mba hamaliana fanontaniana dia matetika no tsy mitombina.
Ireo no ahy “Maninona ianao, maninona izao”Masontsivana. Angamba tsy mpanjifanao lasibatra aho. Raha tsy izany aho dia aza misalasala tsy miraharaha ny hevitro. Fa aza mieritreritra hoe fantatrao ny mason'ny fanapaha-kevitra ho an'ny mpanjifanao. Makà fotoana hanontanianao ny mpanjifanao ny antony nifidianany anao, ary manatsara ny fandefasana ireo lafin-javatra ireo ary ho lasa tsy misy dikany intsony ny vidiny.
Tags: fitantanana marikamarketing marikafoana Contactformstackfitantanana ny vokatravarotra vokatraprovimRoundpeg
Fampiasana ny herin'ny haino aman-jery sosialy - 16 martsa, Tampa